Soso-kevitra sy fitaovana hialana amin'ny sakana famoronana | Famoronana an-tserasera
Isika rehetra dia samy nanana tamin'ny fotoana iray hidy famoronana. Androany rehefa miezaka mafy ianao fa tsy afaka manao zava-baovao, ny asanao dia miteraka anao ary tsy mahita fitaomam-panahy amin'ny zavatra hafa ianao. Aza matahotra fa tsy irery ianao Ara-dalàna izany. Indraindray isika dia miasa mandra-pahatonga antsika ho voky, manosika ny tenantsika hihoatra ny tratrantsika ary hiafara amin'ny a trotraka, na soritr'aretina may.
Na dia miasa amina asa famoronana ianao, Lojika izany Mampatahotra anao ny fanaovana asa mitovy amin'izany mandritra ny fotoana ela, ary indraindray dia ho tojo izany toe-javatra izany ianao. Taorian'ny taona maro nisian'ny sakana famoronana tsindraindray, dia namorona fomba iray aho ampiasao izy ka reseo.
1 Mitadiava loharanom-panentanam-panahy vaovao
1.1 Hanova haino aman-jery
1.2 Andramo ny miara-miasa aminy
Mitadiava loharanom-panentanam-panahy vaovao
Azo antoka fa misy faritra kanto izay miantso anao mihoatra ny hafa, izay matetika alehanao rehefa mila hevitra amin'ny endrika vaovao ianao. Rehefa manana sakanana ianao dia sarotra aminao ny mahita fanampiana any amin'ilay faritra andehananao matetika, noho izany Tsy maintsy manova ny puce ianao. Nahazo aingam-panahy kokoa ve ianao tamin'ny sary hosodoko tamin'ny vazy japoney? Androany ianao dia hitady famolavolana ankehitriny minimalist. Ny mozika ve no sainao miverimberina? Manandrama boky.
Ohatra, tena aingam-panahy ahy ny tarehin'olombelona amin'ny loko matevina, endrika fisaka ary minimalism amin'ny resaka loko, fa satria izany no ataoko matetika, raha mila fiatoana aho Mijery horonantsary aho, mamaky sary be pitsiny miaraka amina paleta miloko kokoa. Mikaroka any amin'izay tsy hitako matetika aho, satria indraindray ny fitaritana ny fahaiza-mamorona ilaintsika no tsy ampoizina.
Izany koa dia mitondra any amin'ny media nomerika, mazava ho azy. Misy pejy maro izay afaka manampy antsika raha misy sakana famoronana, toy ny bilaogy kanto, Tumblr, Pinterest o Instagram, izay ahitantsika mpanakanto, haino aman-jery, endrika ary fomba fijery samihafa avy amintsika. Ary mazava ho azy, raha mahita aingam-panahy amin'ny haino aman-jery nomerika isika, ny zavatra tsara indrindra dia ny mandeha mitsangatsangana, mahita tarehy vaovao, mitady loko manintona amin'ny natiora.
Ny fanakanana ny famoronana dia nanjary olana be loatra ka nahatonga azy ireo namorona hafa fitaovana hanamboarana azy. Izaho manokana dia mampiasa ilay rindranasa finday Inona no hosarihana? ary ny tranonkala Art Prompts . Ireo dia fitaovana fanolorana scenario, toetra na konsep ho azonao ampiasaina ho fototry ny famoronana manaraka.
Ohatra amin'ny Art Prompts.
Hanova haino aman-jery
Toy ny amin'ny aingam-panahy, isika rehetra dia mirona amin'ny famoronana endrika zavakanto manokana, toy ny sary amin'ny taratasy, sary hosodoko, sary vongana na fanovana sary. Ny fahalalana ny zavatra tadiavintsika dia manan-danja toy ny fahalalana izay mila poloney amin'ny fampiharana bebe kokoa. Raha mijanona ao amin'ny faritra mampionona antsika foana isika dia tsy mandroso amin'ny lafiny hafa amin'ny asantsika. Rehefa manana sakanana aho dia manandrana manatratra lavitra araka izay azoko atao matetika; Manidy ny Illustrator aho ary manokatra ny Paint Tool Sai. Manidy ny Photoshop aho ary manokatra After Effects. Ny fanovana ny haino aman-jery dia mahatonga antsika hahita ny asantsika amin'ny lafiny hafa ary afaka manampy antsika hanatsara ny asa teo aloha.
Andramo ny miara-miasa aminy
Raha ny fitenenana, raha tsy maharesy azy ireo ianao, manantona azy ireo. Ity ny paikady izay nanampy ahy indrindra tamin'ny fotoana nisakanana ny famoronana. Tsy mieritreritra zavatra hafa ankoatry ny sakana ve ianao? Ataovy sary ny sakana. Soraty fa voasakana ianao. Hamoaka fihenjanana ianao ary hamorona zavatra mandritra izany fotoana izany.
Amin'ny fotoana toy izao dia tonga ao an-tsaina ny sarin'ny olona miaraka aminy. atidoha toradroa, loko maloka, zavatra tsy mahasarika. Ny zavatra tsara indrindra dia ny famelana, ary jereo izay azontsika aleha. Ohatra, zavatra mankaleo mety ho olona manao akanjo. Afaka mamorona a montage sary fehikibo iray amin'ny conveyor feno kopian'ny lehilahy iray ihany ao anaty palitao, ary apetaho amin'ny karazana fanoratana izay ilazanao ny fahasosoranao.
Ho an'ity ohatra manokana ity dia nampiasa sarin'ireo olona mpandraharaha aho ary nanampy lahatsoratra momba ny zavatra mety ho tsapako ao anaty sakana famoronana, miaraka amina vazivazy. Nisafidy ny hanolotra azy io ho toy ny flyer dokam-barotra ho an'ilay orinasa noforonina aho "Rutina SA”, Hatramin'ny fotoana ieritreretako ny fanakanana dia mieritreritra tontolo iainana orinasa sy orinasa lehibe maro miaraka amin'ny akanjo manga sy olona mahitsy sy mitovy aho.
Fivoriambe SA mahazatra
Ny zavatra tsara amin'ity fanatanjahan-tena ity dia ny hahitan'ny tsirairay zavatra iray. Ho ahy dia ireo no miakanjo akanjo, ho anao izy ireo dia mety ho orana rehefa tsy afaka mivoaka ny trano ianao, ary eo no manomboka ampiasao ny hidin-trano hahasoa anao. Samy manana ny sary sy ny fizotrany ary miasa amin'ny haino aman-jery samy hafa ny tsirairay avy, noho izany dia hiovaova be ny valiny amin'ny olona iray. Tena mamporisika anao aho hiezaka hanadino azy io ary hiezaka ny hanana zavatra tsara avy ao aminy, ary manantena aho fa hanampy anao hanana fomba fijery kely kokoa momba ny sakana famoronana manaraka. Ny zava-dehibe indrindra dia tazomy ny toe-po tsara ary mazava fa amin'ny fotoana iray hitobaka indray ny hevitra fifadian-kanina.
Sary ampiasaina amin'ny fivoriambe:
Manondro, vehivavy manondro, lehilahy mitsiky.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fanalahidy handresena sakana famoronana
Javier Fernando Del Bel sary placeholder dia hoy izy:
Mazava sy didaktika. Zava-dehibe ny fananana fanampiana sy fomba hialana amin'ny sakana famoronana. Ny zavatra voalohany dia ny mitady fomba tsy hianjera amin'ny iray. Ny tsy entin'ny fahazarana mahazatra dia fomba tsara fa tsy mijanona ny fotoana ary, rehefa toa tsy ampy dia misy izany risika izany. Izy io dia olana iray izay misy fiatraikany lavitra mihoatra ny aingam-panahin'ny mpamorona iray, mikasika ny zava-drehetra izy io, na dia ny lafiny akaiky indrindra amin'ny fiainana aza
Valiny tamin'i Javier Fernando Del Bel
Adobe Photoshop dia nahazo ny loka voalohany ho an'ny Academy